राधा पोखरेल भन्नुहुन्छ; दिनानुदिन बलात्कार बढ्दै जानु देशको बेइज्जती हो। – Shirish News
राधा पोखरेल भन्नुहुन्छ; दिनानुदिन बलात्कार बढ्दै जानु देशको बेइज्जती हो।
वहिनी दाईबाट वलात्कृत भएकि छे, छोरी आफ्नै वाउबाट वलात्कृत भएकी छे, प्रेमिका प्रेमिबाटै वलात्कृत भएकि छे, पिडित न्याय दिलाउने निकायबाटै वलात्कृत भएकि छे । दुधे बालिका देखि वृद्धालाई सम्म नछाड्ने यौनपिपासुहरूलाई फाँसी दिने कानुन बनाएर नारीहरूको रक्षा गर्न किन हिचकिचाउँछ यो सरकार ? के यो देशमा नारी भएर जन्मनु दोष हो ?
अव यस्तै हुँदै जाने हो भने यो देशमा बुर्का लगाएर हिँड्नु पर्ने अबस्था नआउला भन्न सकिन्न !!
हरेक दिन एकपछी अर्का यस्ता खालका घटना आइरहदा देशकै बेइज्जत भएको छ अब राज्य गम्भीर बन्ने बेला भएको छ वलात्कार बिरुद्ध सम्बन्धित सबै निकाए कठोर बनेर कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ।
दिनानुदिन नेपालमा वलात्कारको घट्ना बढनुका मूख्य कारण कानुन कमजोर सँग सँगै खुल्ला अश्लिल वेभसाईटहरू हुन, यतातिर ध्यानाकर्षण होस सत्तापक्षको !